Braziil oo kaalinta labaad kaga jirta dalalka uu si weyn u sameeyay Covid 19 - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Braziil oo kaalinta labaad kaga jirta dalalka uu si weyn u sameeyay...
Braziil oo kaalinta labaad kaga jirta dalalka uu si weyn u sameeyay Covid 19
Braziil ayaa diiwaangelisay koror kale oo weyn oo ah tirada dadka uu ku dhacay Cudurka Corona Virus , waxaa ay maanta ka sara martay dalka Ruushka oo ku jiray kaalinta labaad.
Dalka Braziil wuxuu hadda diiwaangaliyay 330,890 infekshan iyo 21,048 dhimasho ah.
Tirada maalinlaha ah ee dhimashada ayaa ka sarreysa 1,000 afartii maalmood ee la soo dhaafay.
Madaxweynaha garabka midig ee reer Brazil Jair Bolsonaro wuxuu si isdaba joog ah u dhalleeceeyay talo bixinta caafimaadka bulshada, wuxuu dhaleeceeyay talaabooyinka xirida iyo hoos u dhigida halista Covid-19.
Sida laga soo xigtay tirokoobyada Jaamacadda Johns Hopkins, Mareykanka wuxuu diiwaangeliyay in kabadan 1.6 milyan oo xaaladood iyo ku dhawaad ​​96,000 oo dhimasho ah halka Russia ay xaqiijisay 326,488 cudur iyo 3,200 oo dhimasho ah.
Next articleDHAGEYSO: Warka Duhur 23-5-2020